Fanentanana: Miaro Antsika Ny Tsy Fitononana Anarana — Ka Andeha Arovana Ny Tsy Fitononana Anarana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Septambra 2016 6:01 GMT
Atahorana kokoa tsy toy ny hatramin'izay ankehitriny ny zo miaro ny tsy fitononana anarana.
Mifanindran-dalana amin'izany, miha-mahazo teknolojia ahafahana mitsikilo olom-pirenena ny fitondram-panjakana, zatra mampiasa ny rafitra fanaraha-maso ara-teknika [fitsikilovana] izay mihoatra noho ny omen'ny lalàmpanorenana. Mandresy lahatra izy ireo fa ilaina hiarovana ny filaminam-pirenena ireo lahasa ireo.
Tena zava-dehibe indrindra ny tsy fitononana anarana satria miantoka ny fahalalahana tahaka ny fahalalahana maneho hevitra, ny zo hivory, ny zo hanao fihetsiketsehana ara-tsosialy, ary ny zo hitady vaovao sy hahazo fanampiana, ankoatra izay tsy voatonona.
Miaro antsika ny tsy fitononana anarana. Andeha arovana ny tsy fitononana anarana.